Ndeapi makirasi ekungogarawo pasi: Regime, mapensheni uye kodzero | Ehupfumi Zvemari
Kangani nguva isu takanzwa nezvehutongi hwemapashure emakirasi? Ndeapi makirasi ekungoita? Chii chine chekuita nevakuru? Iyi ndiyo mimwe yemibvunzo yakawanda yatinozvibvunza pamusoro penyaya iyi. Passive makirasi ndeimwe yedzakawanda nzira dzekufukidza idzo mune dzadzo dzese dzinoumba iyo Special Social Security Scheme yakanyatso kumisirwa vakuru veHurumende.
Iyo General Directorate yeMari Yevashandi neMapension ePublic ebazi rezveMari raitarisira kutarisira pension yekurega basa neyemauto nevashandi vehurumende kusvika 2020. Asi kubva muna Ndira 13, 2020 iri Ministry yeInosanganisirwa, Kuchengetedzwa Kwemagariro neMigration avo inotora basa iri uye kubva Kubvumbi wegore rimwe chetero iyo National Institute of Social Security iri pamusoro pevatariri. Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve ino regimen uye uwane chaizvo izvo passive makirasi ari, ini ndinokurudzira kuti iwe uenderere mberi kuverenga ichi chinyorwa.
1 Ndeipi Passive Kirasi Regime?
1.1 Chiyero chekuvhara
2 Ndiani anobhadhara pensions yemapashure emakirasi?
3 Ndeapi kodzero dzekungoita?
Ndeipi Passive Kirasi Regime?
Kuti tizive kuti ndeapi makirasi ekungoita, isu tinofanirwa kuziva kuti kune yakasarudzika mutemo mutemo kwavari. Izvi zvinopa dziviriro kubva kungozi dzekuremara, kukwegura, kupona uye kufa kuSpain. Zvisinei, zvinongoshanda chete kuvakuru veHurumende mushure mekurega basa kana kufa.
Zvakare zvinosanganisirwa ndevamwe vatungamiriri vanobva kumasangano asiri eHurumende uye kubva kune mamwe mabumbiro ebumbiro. Mienzaniso yeiyi ingangove Cortes Generales, Dare reAccounts, Constitutional Court, General Council yeJaji kana Ombudsman. Vamwe vakuru, vakaita sevaya vevanhu vanozvimiririra, vemunharaunda kana veSocial Security nzanga, ivo havana kuverengerwa mukati mekudzivirirwa kweiyo Passive Kirasi Regime.
Pazasi isu tinopa runyorwa rweyako nzvimbo chiyero chekuvharidzira chiri chePasive Makirasi Regime.
Vakuru vemabasa e Kutongwa kweJustice, maCortes Generales uye neHurumende yeHurumende.
Vemauto chebasa, chezviyero zvekukwanirisa uye chekuchengetedza chengarava uye chengarava nemauto ehunyanzvi Zvakare avo vanoita basa remauto munzira ipi neipi: ma cadet, vavhoterwa uye vadzidzi vezvikoro zvemauto uye zvikoro.
Vese vashandi venguva pfupi vanotaurwa muchinyorwa 1 cheDecree-Law 10/1965, yaGunyana 23. Izvi zvinosanganisira vanhu ivavo avo vanoshanda muAtonomous Communities nekuda kwekuendeswa ikoko.
Vakuru vebasa veimwe nyika kana bumbiro remitemo. Chete muchiitiko chekuti mutemo wayo unodzora unozvipa nenzira iyi.
Vakuru vehurumende vari pamitambo yekudzidzira uye vakamirira kuisirwa mushe kumitumbi, chikero kana mativi. Izvi zvinosanganisira vadzidzi muzvikoro zvemauto uye zvikoro.
Iwo makurukota, vatevedzeri vemutungamiri uye vaimbova vatungamiriri veHurumende yeSpain.
Ndiani anobhadhara pensions yemapashure emakirasi?
Kusvika nguva pfupi yadarika, raive Bazi rezveMari neRuzhinji Kutonga raidzora mapensheni emakirasi ekungoita. Nekudaro, kubvira 2020 iyo Ministry yeIn Inclusion, Kuchengetedzwa Kwemagariro uye Kufamba kwave kuri kutonga izvi. Zvisinei, kune yakakosha Social Security scheme iyo iyo vashandi vehurumende vanopa. Nekudaro, mapenjeni avo anosiyana kubva kune mamwe ese. Ivo vese vanhu vakawana nzvimbo yavo semukuru pamberi pa2011 vanopinda muPassive Classes Regime uye mutualist Regime.
Kuti uwane mapensheni eutongi uhu, mukuru ari kutaurwa Unofanirwa kunge wakashanda makore gumi nemashanu uchishandira Nyika. Kuti uwane iyi pensheni, chimwe chezvikonzero zvinotevera chinofanirwa kupihwa:
Wasvika pazera repamutemo rekurega basa. Parizvino ane makore makumi matanhatu nemashanu ekuberekwa, asi kana vari vatongi, vachuchisi, vatongi nevanyori vematare, ane makore makumi manomwe.
Nekuda kwemukuru. Kana iwe wakashanda kuHurumende kweanopfuura makore makumi matatu uye wasvitsa zera ramakumi matanhatu, iwe unogona kunyorera kunonoka kuenda pamudyandigere.
Kuremara zvachose kukwanisa kupa sevhisi.
Ndeapi kodzero dzekungoita?
Rudzi rweSpecial Regimes runowanzove nenhanho nhatu dzematanho ekuvhara, atinozotaura pamusoro pazasi kujekesa kuti ndeapi makirasi ekungoita.
Passive kodzero system
Iyo yekungoita kodzero system inosanganisira iyo Pension-zvine hukama nehupenyu mapensheni. Kumanikidzwa, kuzvipira uye kuremara pamudyandigere. Inopawo mapenjeni mukufarira hama mumamiriro ezvinhu euchirikadzi, hunherera nekuremara zvachose. Iyi sisitimu yekodzero yakajairika muhutongi hwevashandi vehurumende veHurumende, vashandi vehurumende veMasoja nemauto evashandi veHurumende yeHurumende.
Mukwanisi weiyo yekodhi yekodzero system mutualism. Inosanganisira mabhenefiti ehutano, sekuchengetwa kwehutano kana mishonga yemishonga, nevemagariro, zvakaita semari yekuremara kwenguva pfupi. Kune huwandu hwenzvimbo nhatu dzinogadzirisa hutongi mutualism: MUFACE (Mutual Society of Civil Servants of the State), ISFAS (Social Institute of the Armed Forces) uye MUGEJU (General Judicial Mutual Fund).
Rubatsiro rwemhuri kana rubatsiro rwekubatsira
Rubatsiro rwemhuri kana mabhenefiti anowanikwa zvakanyanya muhutongi hwevashandi vehurumende veHurumende yeJustice, Mauto Emauto nevashandi veHurumende.
Ndinovimba ichi chinyorwa chakubatsira iwe kugadzirisa kusahadzika kwako maererano nemapenjeni evashandi vehurumende uye kuti uzive zvirinani kuti ndeapi makirasi ekungoita.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » Ndeapi makirasi ekungoita
Landlord uye tenant